Maalin Adeeg | Martech Zone
Isniin, Janaayo 15, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waxaan ku maqlay warka maanta in Dr. Martin Luther King xaaskiisa ay rajeyneysay in maalinta ay noqoto maalin adeeg. Waxaa jira xoogaa wax lagu qoslo ah oo ku jira farriinta markii aan qoraalkan ka qorayo Starbuck. Waa tan maalintayda maanta:
Gabadhayda ayaa xalay guriga la timid iyadoo leh qandho aan nuujineynay 24-kii saac ee la soo dhaafay. Waxay ahayd habeen iyo maalin aabbe iyo walaal adeeg! Aabe wuxuu u cararaa farmasiga waxyaabo badan, walaal wuxuu nadiifiyaa qaska markii walaasheed aysan awoodin inay ku oroddo musqusha waqtigeeda. Heerkulkeedu wuu sii kordhay si ku filan oo waxaan u wacay Dhakhtarka, oo ii sheegay inaan iska sugo. Waan ogaa inaan dhibaato ku jirno, in kastoo, markii aan galay qolkeeda oo ay kor iyo hoos ugu boodaysay furaashka, gabi ahaanba waa sheeko xariif. Waan dejinay oo waxaan ku soo celinay hurdo. Tukasho tuko - waxay umuuqataa inay tahay habeen dheer caawa sidoo kale.
Isla mar ahaantaana, DSL-keygu wuxuu go'aansaday inuu qaado qashin-qubka 4 sano ka dib isku xirnaan dhagaxan-adag. Marka ma aanan helin wax ka yar 8 wicitaan taleefan oo aan la leeyahay AT&T, booqasho aan ku imaado 1 'line' farsamo yaqaan, berrito waxaa imanaya farsamo yaqaan 'DSL'. Qeybtu gabi ahaanba waa wax lagu qoslo. Waxaan hubinayay emaylka PDA muddo 2 maalmood ah oo aan awoodi kari waayey inaan wax uun qabto. Inta lagu jiro xilliyada hurdada ee gabadheyda waxaan si buuxda u waalanayaa waalan.
Ka dib, si aan u buuxiyo, waxaan wicitaanno aan kala joogsi lahayn ka helay dadyowga u baahan caawimaadda maanta. Anigu runtii ma awoodin inaan cidna caawiyo sababtoo ah DSL-kayga oo hoos u dhacay. Sidaa darteed waxaan u baxsaday daqiiqado yar caawa, waxaan uga tagay wiilkayga mas'uulka ka ah iyo gabadhayda oo hurda, si aan idinla socodsiiyo dhamaantiin waxaan u adeegayaa sida ugu fiican ee aan awoodo waxaana rajeynayaa inaan soo laabto online, jir ahaan iyo farsamo ahaanba, maalmo gudahood.
Marwo King, waan ogahay inaad wax kale maskaxdaada ku hayso markaad kahadlayso adeega… laakiin waan ogahay inaad fahmi doontid inaan samaynayo intii karaankeyga ah hada. 🙂
Mid ka mid ah warka wanaagsan maanta, waxaan ku taxanahay Top 150 Power Blogs Blogs oo Todd Iyo isku dhafan currently Anigu waxaan ahay hadda # 80!
Mahadsanid, Todd! Algorithm fiican iyo farsamaynta darajada!
AT&T way i Niyad jabeen Isbuucaan, laakiin Shaqaalahoodu Ma yeelin
Jan 15, 2007 saacadu markay ahayd 9:51 PM
Haye Doug - Nin yahow, maxaa maalin ah - fikirradayda ayaa kula jira adiga iyo qoyskaaga.
Jan 16, 2007 saacadu markay ahayd 1:36 PM
Doug, rajeynayaa in gabadhaadu ay wanaag dareemayso!